नखाएको बिषको औषधी खरानीको डल्ला ! « Gajureal
नखाएको बिषको औषधी खरानीको डल्ला !
प्रकाशित मिति: २५ मंसिर २०७६, बुधबार ११:१६
भनिन्छ,खाएको बिष पो लाग्छ, नखाएको बिष के लाग्छ ! हुनु पर्ने त यहि हो । तर सधैं यस्तो हुँदो रहेनछ । दंगाली महरा बिषको भाँडोमा चोबिएपछि तेह्रथुमकी शिवमाया तुम्वाहाम्फेलाइ विषका छिट्काहरुले छोयो । झन्डै छोड्नु न समाउनु, रुनु कि रमाउनु झैँ भयो । न माथि चढ्न पाउँने न त्यहीं अड्न पाउने दुविधाले निकै सतायो । बिधि र थिति जान्नु पर्ने, पार्टीका कुरा मान्नु पर्ने कुराले उनको धर्ममा संकट पारेको छ । यसबेला यो ‘उ’सभामुख पद उनका लागि ‘नखाउँ भने बल्ल पाएको इज्जतिलो जागिर, खाउँ भने अर्कैले खोसिदियो तग्दिर’ ! भने झैं भएको छ ।
सुनिन्छ,पार्टीले उनलाई छोडाउँदैछ, बलैले ‘जा-जिनामा’ गराउँदैछ ! ऐनले तल अड्न नदिए पनि माथि चढ्न रोक्दैनथ्यो । तर सिंगो देशभरी महिलामय ‘उप’ भएको बखत उनलाईन ‘सुपर’ बन्ने अफर कसैले गर्नेवाला पनि छैन । उनका लागि पार्टीले दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्न मच्चिंदा मच्चिंदै थच्चिनुको पिंडा पक्कै शुखद छैन । तर के गर्न सक्छिन र उनले पनि यो लाजनीतिमा ! हुने कुरा हुँदैन, नहुने कुरा केहिछैन, हाम्रै नेपालमा !
सुन्नमाआएको हल्लाले मन्त्रीमा लाने सल्लाह रे ! लाजनीतिमा भएका धेरै सल्लाह देख्दा सुन्दा निकै आकर्षक हुनछन, छ्यास्स छुँदा फ्यास्स फुट्ने खरानीका डल्ला बराबर भएका छन् । माननीयज्यूलाई हाम्रो सुझाव छ – कर्म पनि गर्दै आउनु भएको थियो , थाप्लामा नि लेखेरै ल्याउनु भएको थियो ! तानातानकाबीच मौकामा उप पाउँनु भयो, कामलाई राम्रारी समाउनु भयो । काम पाउनु भन्दा इज्जत जोगाउनु ठुलो कुरा हो । प्रतिष्ठा बोकेर फर्कंदै हुनुहुन्छ, धैर्य गरेर अड्नु होला, मौकामा माथि चढ्नु होला ! बुद्धि पुर्याएर जुट्ने गर्नुस सल्लाहमा, फ्यास्स फुट्न सक्छ विश्वास नगर्नुस खरानीको डल्लामा !
फोटो सभार : सामाजिक सन्जाल ।